Vagari vemuGweru Vanotambira neMufaro Uye Kusuwa Bhajeti ra2011
Mbudzi 19, 2010
Kanzuru yeguta reGweru yazivisa vagari vayo kuti inotarisira kushandisa mari inoita US$15.58 million mumabasa aichaita gore rinouya. Izvi zvaburitswa neChishanu pamusangano waitwa nekanzuru nevagari vemuguta iri.
Vachitaura pamusangano uyu mubati wehomwe yekanzuru, VaEdgar Mwedzi, vati kanzuru yaive yamboita hurongwa hwemari yaisvika mamiriyoni makumi maviri emadhora ekuAmerica izvo zvaizoita kuti kanzuru ikwidze mitero nezvikamu zvinopfuura makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60 per cent.
Asi VaMwedzi vati kanzuru yakazodzikisa mari iyi kusvika pa US$15,58 million sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika munyaya dzehupfumi. Vati vaitarisira kuwana mari inoita mamiriyoni gumi nemasere emadhora panopera gore, asi mari yavari kuwana kubva kumitero yava kusvika pamamiriyoni gumi nemaviri emadhora chete.
Vatiwo mapazi ehurumende pamwe chete nevemabhizimisi vane chikwereti kukanzuru chinosvika mamirioni matanhatu emadhora eku America vakakurudzira vanhu vose kuti vabhadhare zvikwereti zvavo kuitira kuti kanzuru igokwanisa kuita mabasa ainofanirwa kuita nemazvo.
Vatiwo nekuti zvinhu zvakaoma munyaya dzehupfumi, kanzuru inotarisira kudzikisa chikamu chemari yevashandi kubva pazvikamu makumi matanhatu nezvitatu kubva muzana, kusvika pazvikamu makumi mana nezvina kubva muzana nekuti haizi kuzowedzera mihoro yevashandi sezvakatarwa nebazi rezvematunhu, uye haisi kuzokwidza mitero.